PLA နှင့် PET ပစ္စည်းပုလင်းတို့၏အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်မှာစက်မှုလုပ်ငန်းဖြည့်သည့်လုပ်ငန်းတွင်မည်သည့်အရာနည်း။
အမှိုက်ခွဲခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ခြင်းပြtheနာအပေါ် အခြေခံ၍ PLA ပုလင်းသည်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းတွင်အဓိကဖြစ်ပါသလား။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်မှ စ၍ ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ်သည်အမှိုက်များကိုခွဲခြားရန်အတင်းကြပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ အစအ ဦး တွင်အမှိုက်ပုံးဘေးတွင်မှန်ကန်သောခွဲထုတ်ခြင်းကိုကူညီခြင်း၊ လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးချနိုင်သောပစ္စည်းများ၊ မီးဖိုချောင်မှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊
မဖြစ်မနေအမှိုက်ခွဲရန်ပြseparနာမှကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းအဖျော်ယမကာပုလင်းဘယ်မှာသွားမည်နည်း အပူဆုံးမေးခွန်းနှင့် quora ကိုဖြေပါ။ သူတို့သည် PLA မှပလပ်စတစ်ရေ၊ ဆိုဒါ / နို့ပုလင်းများကိုအဘယ်ကြောင့်မထုတ်လုပ်သနည်း။
ငါတို့သိသည့်အတိုင်းအဖျော်ယမကာပုလင်းများကို PET၊ PP, PE, PC တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အပူချိန်မြင့်မားပြီးရေပူ၊ အက်စစ်၊ အချဉ်ရနံ့၊ ရှလကာရည်စသည့်အက်စစ်အခြေအနေများအောက်ရှိအချို့သောတွင်းထွက်ရေပုလင်းအချို့သည်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဖျက်သိမ်းမှုရှိနိုင်သည်။ တွင်းထွက်ရေပုလင်းများကိုယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ကြိမ်တွင်အသုံးပြုကြသည်။ နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ။ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
PLA ပုလင်းကိုသဘာဝအခြေအနေများအရအနှစ် ၅၀ အတွင်းပျက်စီးလိမ့်မည်။ Crystalline PLA သည်အစားအစာအဆက်အသွယ်လုပ်ငန်းများတွင်သီအိုရီအရအသုံးပြုနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းသည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုဇီဝရရှိနိုင်စေရန်အတွက် In-tank composting (hydrolysis) လိုအပ်သည်။ ၎င်းကိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးမူလအလေးချိန်၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ကိုချန်ထားပေးသည်။ သို့သော်ထွက်ပေါ်လာသောပစ္စည်းသည်ဆွေး၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အာဟာရဓာတ်များကိုသာထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းထက်ထိရောက်စွာစွန့်ပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှု ၅၀၀,၀၀၀ အားဖြင့်တွက်ချက်မှုအရ ၂၁ ဂရမ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် preform ၏ကုန်ကျငွေမှာ ၀.၀၄၁ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
၂၁ ဂရမ် PLA preform ၏တန်ဖိုးမှာ ၀.၁၈၂ ဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်နှစ်ခုသည် ၄.၅ ဆကွဲပြားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကုန်ကျစရိတ်ကွာဟမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ရ, မည်မျှအဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်သူကတတ်နိုင်?
အဖျော်ယမကာဖြည့်လုပ်ငန်းတွင်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့် Higee Machinery （Shanghai） Co. , LTD သည်ပုလင်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပုလင်းဆေးကြောခြင်းအဖုံးများနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းများအထိအပြီးသတ်ထုပ်ပိုးပြီးသည်အထိနောက်ဆုံးထုပ်ပိုးခြင်းအထိပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသွင်သဏ္ဌာန်ပုလင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုမှ preform ။ ထို့နောက်ပုလင်းတစ်လုံးသည် 1 monoblock အဝတ်လျှော်သည့်အဖုံးသုံးစက်သို့သွားသည်။ PLA ပုလင်းသည်ပုလင်းထဲရှိ ၃ ပုလင်းအပြည့်ဖြည့်သည့်စက်တွင်အလုပ်လုပ်နေသောအဆင့်အားလုံးအတွက်သင့်တော်ပါသလား။
စက်မှုလုပ်ငန်းဖြည့်တင်းခြင်းအတွက် PLA နှင့် PET ပစ္စည်းပုလင်း၏အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်ကဘာလဲ။ ဘယ်နိုင်ငံက PLA ပုလင်းများပိုသုံးတာလဲ သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုအီးမေးလ် admin@higeemachine.com နှင့် +86 18616918471. ဖုန်းမှတဆင့်မျှဝေရန်ကြိုဆိုပါသည်။ အတူတူဆွေးနွေးကြစို့။
post အချိန်: ဒီဇင်ဘာ -17-2019